Nhau - Zvichida Rakanaka timu Kuvaka
Sechinhanho chingangove chakanakisa chirongwa chekuvaka timu, Beajom yakatanga danho rekukwirisa rinogona kutengwa uye injinjini yekushandira uye chirongwa chekudzidzisa mumwaka we2020 wemwaka wekupedza mwaka weyunivhesiti musi wa16 Gumiguru 2020 paJiaxing University. Vanopfuura mazana matanhatu vadzidzi vevadzidzi kubva kune vakasiyana navo vakabatana mumusangano wekubvunzurudza.
Maonero ekambasi yekutsvaga mamiriro.
Yunivhesiti yepamusoro vadzidzi vanoshingairira vatori vechikamu
Sevanhu-vanonongedza Beajom, HR director akashanda chirongwa chakakosha chekudzidzisa chevatsva-bhodhi vashandi vachangopedza kudzidza kuyunivhesiti mu2020. Zvinoreva 7 * 7 * 7 chirongwa chekurima (maawa manomwe-mazuva manomwe-mavhiki manomwe)
Mumaawa manomwe ekutanga, chipangamazano kubva kuHR achatungamira kuhofisi tsika tsika. Chinangwa ndechekuita mushandi mutsva akurumidze kuziva timu yeCSR uye nhamba dzevatengesi.
Basa reboka rinogara riine kushushikana muBeajom kambani geni. Tinokurudzira yakavhurika yekutaura-up tsika mune diary basa kana chero munhu nyonganiso mune imwe nzira tekinoroji nyaya kana info kutaurirana. Aya kinks ebasa-dhizaini anochengetedza timu-basa kugona uye mushe.
Sechikamu chechipiri chirongwa chekudzidzisa, isu tichazotungamira vashandi vedu vatsva kuti vadzidze kubva kumusangano mumazuva manomwe anotevera, kuti vanzwisise zvirinani maitiro edu ekugadzira uye mhando dzekudzora mhando. Zvino zvirinani kuziva edu ekutengesa mapoinzi eBeajom zvigadzirwa.
Bvuma paramende yekugadzira uye chivakwa munzvimbo yechigayo.
Nekuchenjera tarisa yega yega mhando-yekudzora poindi. Pakupedzisira chengetedza hapana chero chakasarudzika mukuenderera kwekugadzira.
Sechikamu chechitatu, isu takapa mukana wevashandi vatsva kuti vadzidze kubva kuFGI (yakapedzisa zvinhu kugadziriswa) kudzora uye vatengi AR vachiongorora nguva nenguva kuti vakurumidze tsananguro yemabasa tsananguro yeCSR nenzvimbo dzebasa. Chirevo chepfupiso chemuedzo mushure memasvondo manomwe-anotenderera ekudzidza nzvimbo, zvinotungamira vatambi vedu panzira dzekugona basa rakatsva.